टिनेजमै देखिनसक्छ पाठेघर क्यान्सरको समस्या, शरीरले दिने यी संकेतलाई नगर्नुहोस् वेवास्ता – Sandesh Press
October 3, 2021 237
काठमाडौँ । पछिल्लो समय महिलामा गर्भाशयको समस्या तिब्र रुपमा बढिरहेको छ। गर्भाशयको क्यान्सर आजभोलि आम समस्या बनेको छ।
५) सानै उमेरमा विवाह गरेका वा पटक पटक गर्भधारण गर्ने महिलामा पनि पाठेघरको क्यान्सर हुने सम्भावना अधिक रहन्छ।
सामान्य लक्षणलाई वेवास्ता नगर्नुहोस्। बेला बेलामा डाक्टरको सल्लाह लिन आवश्यक हुन्छ। आजभोलि यसबाट बच्न भ्याक्सिन पनि उपलब्ध छ। डाक्टरको सल्लाहमा भ्याक्सिनको प्रयोग गर्नुहोस्।
शरीरमा कुनै परीवर्तन देखिए भने तुरुन्त चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस्। आफ्नो जीवनशैलीमा सुधार गर्नुहोस् र अस्वस्थकर खानेकुरा खानबाट बच्नुहोस्। हरेक दिन योगा तथा एक्सरसाइज गर्नुहोस् ।
Prevयी ३ चिज दान, उपहार र सापटी दिँदै नदिनुस्, बन्नसक्नुहुन्छ कंगाल !
Nextपैसा कमाउन चाहनुहुन्छ ? लगाउनुस् घरमा चुम्बकले जसरी पैसा तान्ने क्रासुला मनी ट्री
रवि लामिछाने र गगन थापाबीच भएको गोप्य कुराकानी भयो लिक…
लाखौ लाख ले हेरेको यो भिडिओ: टिकटकर म्यादी प्रहरी निरुता साह कार’ वाहीमा ( हेर्नुहोस भिडियो सहित )